Ishishini lakho liJika njani ukuba iiNdwendwe ezingaziwa kwiWebhusayithi zibe ziiNkokeli | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 13, 2014 NgoLwesibini, Juni 16, 2015 Douglas Karr
Kunyaka ophelileyo, sivavanye izisombululo ezahlukeneyo kubathengi bethu be-B2B ukuchonga ngokuchanekileyo iindwendwe zewebhusayithi. Abantu batyelela indawo yakho yonke imihla-abathengi, abakhokeli, abakhuphisana nabo, kunye nemithombo yeendaba- kodwa eqhelekileyo kubahlalutyi ayiboneleli ngengqondo kula mashishini. Qho xa umntu etyelela iwebhusayithi yakho, indawo abakuyo inokuchongwa ngedilesi ye-IP. Idilesi ye-IP inokuqokelelwa zizisombululo zomntu wesithathu, ukuchongwa kufakelwe, kunye nolwazi oluthunyelwe kuwe njengesikhokelo.
Ezinye zezisombululo ebesinazo bezisebenza ukusuka kwidatha yakudala, ezinye zinendawo yokunxibelelana eyoyikekayo, ezinye bezingenandlela yakukhulisa iingxelo… bekucaphukisa. Sityikitye ikhontrakthi kwisisombululo esinye esingakhange sihlaziye idatha okanye ujongano lwabo kwaye abasayi kusishiya kwisivumelwano sethu. Njengoko abantu baseDemandbase babhalile, Ukuchongwa kwenkampani kunzima kunokuba ucinga.
I-98% yeendwendwe kwiiwebhusayithi zeB2B ungaze ubhalise okanye uguqule ukuze ungazi ukuba zeziphi iinkampani ezazikwindawo yakho okanye zinokuba bafuna ntoni. Isisombululo seNkulumbuso njengeDemandbase sikwabonelela ngesakhono sokwenza umxholo ngokusekwe kwinkampani etyelele indawo yakho-intle kakhulu.
Iinkampani ze-B2B zibona iziphumo ezintle ngokusebenzisa iinkonzo ezinje ngeDemandbase. Umsebenzi kwiwebhusayithi yakho kunye nophendlo olunxulumene noko oluzise iinkampani apho ziluncedo ekuqhubeni amanqaku, ukubeka phambili, kunye nokuqonda ukuba lithemba okanye umthengi unokukhangela ntoni. Ukukwazi ukubona le datha ngexesha langempela kunokunceda iqela lakho eliphumayo linxibelelane nethemba xa ixesha libaluleke kakhulu - njengoko bephanda iimveliso okanye iinkonzo zakho.
Umsebenzi wabatyeleli unokuphumeza izilumkiso, ubhalwe kumaCandelo oThengiso lwaBathengi baMashishini (CRM) njengeSalesforce, kunye nokwenza amaphulo okondla. Obu buchwephesha bunamandla ekufanele ukuba butyalwe kubo.
tags: IP ishishiniguqula kukhokelelachonga izikhokeloChonga abatyeleliyandisa utshintshoInfusionsoftIP ipiMicrosoft Dynamics crmukuthengisaI-SugarCRMUkuchongwa kwabatyeleli bewebhusayithiIincwadi zomsebenzi.comZoho
Zeziphi izixhobo ezinxulumene nedatha Abathengisi abazisebenzisayo ukulinganisa nokuHlahlela?